Hot news Archives - Wnepal.com
दुई तिहाई मतसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो गतल क्रियाकलापका कारण विवादित बनिरहेका छन् । कहिले स्वतन्त्र मधेसको मुद्दा बोकेका डा. चन्द्रकान्त (सि.के.) राउतसंग सहमति भयो भन्दै जनमत संग्रह गरिएको बाहिर प्रसार हुन्छ, त कहिले नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको पार्टीमाथि राजनीतिक प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गर्छन । ओलीका यी दुबै कार्य नेपालको संविधान २०७२ को खिलापमा […]
भारतीय पञ्जाब नेशनल बैंकको मेजर शेयर र नेपाली लगानीकर्ताहरुको पनि केही शेयर रहेको एभरेष्ट बैंकको करिब १ अर्ब कर्जा डुब्ने भएको छ । एभरेष्ट बैंकको अगुवाईमा मेगा बैंक र सिद्धार्थ बैंकको लगानी रहेको रारा हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको हालत खराब भएको खुलेको छ । दैलेखको दुङ्गेश्वर गाउँपालिकाबाट जलविद्युत कम्पनीको विजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्नेबारे […]
प्रभु बैंक लिमिटेडको १७औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचनको अध्यक्षतामा बबरमहलस्थित बैंकको प्रधान कार्र्यालयमा सम्पन्न १७औं वार्षिक साधारण सभाबाट सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन सहित गत आ.व. ०७४÷०७५ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण लगायतका अनुसूचीहरु पारित गरेको छ । साथै, बैंकको सहायक कम्पनी प्रभु […]
संविधानसभामार्फत जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयन भएपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेको छ । दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात पुनस्थापित संसदले २४० बर्ष लामो राजतन्त्र हटाएर मुलुकलाई गणतान्त्रिक बनायो । तर, अहिले पनि राजसस्था, धर्म निरपेक्षता र संघियता नेपालमा काम छैन भन्ने राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दलहरु यदाकदा पाइन्छन । ति मध्यका एक हुन, राष्ट्रिय प्रजातनत्र पार्टीका अध्यक्ष […]
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले ठाकुरद्वारा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका स्थित ठाकुरद्वारा शाखा कार्यालयको औपचारिक सुरुवात गरेको छ । शाखाको उद्घाटन बैंकका अध्यक्ष तथा पूर्व सभासद डा. बिरेन्द« प्रसाद महतोले गरेका थिए । नयाँ शाखा मार्फत बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई कर्जा, निक्षेप लगायतका सम्पुर्ण बैकिङ्ग सुबिधा उपलब्ध गराएको छ । बैंकलेउक्त शाखामा […]
पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी सवार हेलिकोप्टर ताप्लेजुङमा दुर्घटना भएको छ । तेह्रथुमको चुहान डाँडा एयरपोर्ट निरिक्षणका लागि गएका मन्त्रीसहितको टोली पाथिभरा दर्शनमा लागि गएको थियो । मन्दीर दर्शन गरेर फर्कने क्रममा दुर्घटनामा गरेको हो । ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्राप्त सूचना उदृत गर्दै गृहसचिव प्रेमकुमार राईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पाथीभराबाट चुहान डाँडा जाँदा हेलिकोप्टर क्र्यास भएको खबर […]
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २ फागुनमा आफ्नो एक बर्षे कार्यकाल पुरा गरेको छ । दुई तिहाई मतको सरकारले जनचाहना अनुरुपको काम गर्न नसकेका आरोप सबै पक्षबाट आइरहेका छन् । तर, सरकारले भने मुलुकमा अग्रगामी छलाङ मार्ने काम सुरु भएका दावी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले भने सरकार आफ्नो […]
माछापुच्छ्रे बैंक र चिरायू नेशनल अस्पताल तथा मेडिकल इन्स्टिच्यूटबीच बैंकका ग्राहकहरुलाई छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा माछापुच्छ्रे बैंकको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोईराला तथा चिरायूु नेशनल अस्पताल तथा मेडिकल इन्स्टिच्यूटको तर्फबाट सञ्चालन निर्देशक चण्डेश्वर वैद्यले हस्ताक्षर गर्नुभयो । सम्झौताअनुसार अब माछापुच्छ्रे बैंकका ग्राहकहरूले चिरायू नेशनल अस्पतालका सेवाहरुमा १५% सम्मको […]
जीवन र निर्जीवन बीमाका सयौ उजुरी बीमा समितिमा : कारवाही मात्रै होइन, हस्तक्षेप पनि हुन्छ– अध्यक्ष चापागाई
भूपेन्द्र आचार्य । नेपालको इतिहासमा करिब १५ प्रतिशत बीमा बजार रहेको देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरु बजारमा आक्रमक रुपमा गए पनि बीमा गरेको रकम समयमै नदिने सहि मुल्याकन नगर्ने, दलाली गर्ने, बीमा कम्पनीहरुले गर्ने निर्णयमा बीमा गर्नेहरुले चित्त दुखाउने र लामो समयसम्म पैसा नपाउने जस्ता उजुरी बीमा समितिमा परेको भेटिएको छ । के कस्ता उजुरी आएका छन् […]
रेशमबहादुर लाई फसाउन पूर्वमन्त्री गुप्ताको डर लाग्दो योजना
पूर्वमन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ताको अनैतिक धन्दाको श्रृंखला जारी छ । उनको धन्दा अपराधसँग भन्दा पनि ब्यक्तीगत शुभ-लाभमा निहित हुन्छ । जुन कुरा उनको विगतले पनि बताउछ । पैसा भनेपछि जे पनि गर्न पछि नपर्ने श्यामसुन्दर गुप्ताले एक जग्गा व्यवसायीलाई के मात्रै गरेनन् ? तपाई घटनाका बारेमा सुन्नुभयो भने तिनछक्क पर्नु हुन्छ । आफ्ना हर्कत लुकाउन जग्गा […]
देशले जनताको चाहनाअनुसार फड्को मार्न सकेको छैन्
नयाँ शक्ति पार्टी गत माघ १५ गतेदेखि देश दौडामा छ । गाउँगाउँमा पुगेर जनताको समस्या जानकारी लिने काम गरिरहेको नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्, जनताले मत दिएर जिताएकाले भावना बुझ्न नसके देशको समृद्धि हुन नसक्ने छ । सरकारको नेतृत्व गरिसकेका भट्टराई केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेपनि यस अवधिमा […]
भूपेन्द्र आचार्य । भारतीय पञ्जाव नेशनल बैंकको ठूलो शेयर रहेको एभरेष्ट बैंकको लाभाशं नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा रोक्का गरेको छ । भारतीय व्यवसायी एवं एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष विके श्रेष्ठले लाभांश रोक्का पछि बाध्य भएर १ अर्ब ९९ करोडको करिब २ अर्ब शेयर विक्री गरेको खुलेको छ । बैंकका अध्यक्ष श्रेष्ठ परिवारका सदस्यहरु राधा देवी श्रेष्ठ र नेपाल […]
सीइओ पोखरेललाई म्यानेजर अफ दि इयर अवार्ड
आईएमईका सीइओ सुमन पोखरेल यस वर्षको म्यानेजर अफ दि इएर २०१८ बाट सम्मानित भएका छन् । म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपालले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने यो अवार्ड यसपटक पोखरेलले हात पारेका हुन् । यसैगरी आउटस्ट्याण्डिङ म्यानेजर अवार्ड द्वारिकाज होटलकी अध्यक्ष अम्बिका श्रेष्ठले पाएकी छन्। कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. राजन खनाल उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी विधामा सम्मानित भए। खनालले […]
नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा ‘न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनसम्बन्धी परिपत्र’को विरोध
श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू सम्बन्धमा यही माघ २८ गते सूचना तथा प्रसारण विभागले जारी गरेको ‘न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनसम्बन्धी परिपत्र’ का व्यवस्थाहरु तीन जना पूर्णकालीन नरहेका र श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित नहुने स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई जवर्जस्ती लागू गराउन खोजिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । कात्तिकदेखि लागू हुनेगरी सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीको पारिश्रमिक […]
अख्तियार, सर्तकर्ता केन्द्रको खर्च अपारर्दशिता भ्रष्टाचार अन्त्यले हावा खायो
म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन । अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न । यी अभिव्यक्ति मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीका हुन । तर, मुलुकमा दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचारले जरा गाडेको देखिएको मात्रै छैन । प्रमाणित पनि हुँदै गएको अवस्था छ नेपालमा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्यसहनशीलताको अभ्यास गरेको बताए पनि उनको नाकै मुनी भइरहेको भ्रष्टाचारको बारेमा […]
रंगशाला निर्माणमा राजनीतिकरण र भ्रष्टाचार हुन दिन्न
निकै चर्चामा रह्यो गत हप्ता गौतम बुद्ध अन्तर्रािष्ट्रय क्रिकेट रंगशाला बनाउने खबर । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले चितवनको भरतपुरमा रंगशाला निर्माण सुरु गरे। फाउन्डेशनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेल ‘धुर्मश’ र उपाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ले आइतबार संयुक्त रुपमा डोजर चलाएर रंगशाला निर्माण सुरुवात गरेका छन् । रंगशाला निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाउने काम सुरु भइसकेको छ । २० बिगाहा ८ कट्ठा […]
अब डा. गोबिन्द केसी अनसन बसीरहन जरुरी छैन
सरकारले आफूसित विगतमा गरेका सम्झौताका केही बुँदा छुटाइ ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५’ तयार गरेको प्रति असन्तुष्टि राख्दै प्रा डा केसीले १६ औँ अनशनमा हुनुहुन्छ । गत शुक्रबार संसदबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित गर्यो । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको विरोधकाबीच सरकारले विधेयक पारित गरेको हो । विधेयकमा आफूसँग भएको सम्झौता पालना नभएको भन्दै डा. […]
१४ वाणिज्य बैंकको नाफमा एनआईसी एशियाको छलाङ्ग
निर्मल धिताल । नेपालका २८ वाणिज्य बैंकहरु मध्ये यो समाचार तयार गर्दा सम्म १४ बैंकहरुले आफ्नो ६ महिनाको रिजल्र्ट वाहिर ल्याएका छन् । लगातार बैंकहरुमा चर्को तरलता आएपनि बैंकहरुको नाफा लाखमा होइन । करोड भन्दा माथीमा आएको छ । यो राम्रो संकेत हो । तर नाफा कसरी कमाए बैंकहरुले ? यो खोजीको विषय चाहिँ हो […]
संसद छाडेर जनताको माझमा जान कांग्रेस वाध्य नहोस्
नेपाली कांग्रेसले संसद अवरोध गरेपनि, नगरेपनि र कांग्रेसले भनेपनि नभनेपनि गिरिजा र सुशिल कोइरालाका नामका अस्पतालहरु चल्ने सरकारको जिकिर छ । यहि विषयले अहिले दुवै संसद अबरुद्ध रहेकाछन् । उता,कांग्रेस भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको म्याद थप्ने वा नथप्नेबारे पार्टी भित्र बहस सुरु भएको छ । त्यसैगरि,मधेशबाट जसरी आफ्नो जनाधार गुमाउँदै गयो, अहिले मधेशप्रति कांग्रेसको […]
राष्ट्र बैंकको अर्को दादागिरी
कांग्रेसी गर्भनर डा.चिरजीवी नेपालले बैंकका उच्च कर्मचारीलाई एक पछि अर्को निर्देशन लाद्ने काम फेरि शुरु गरेका छन् । आफ्ना राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड घटाउँदै बैंकको दोस्रो मेन डिपुटी सीइओलाई समेत कुलिङ पिरियड लाद्ने काम शुरु गरेको छन् । जो सत्तामा गयो उसैका दादागिरी जस्तो गरि गर्भनर डा. नेपालले एक पछि अर्को दादागिरीको निर्णय गर्दै […]
दाङ कारागारको क्षमता ५० तर कैदीबन्दी २७४
दाङको घोराहीमा रहेको कारागारको क्षमता ५० जनाको भए पनि त्यहाँ अहिले २७४ कैदीबन्दी छन् । कारागारका सूचना अधिकृत योगेन्द्र रिजालका अनुसार हाल कारगारमा सजाय तोकिएका १६६ र सजाय नतोकिएका १०८ कैदीबन्दी छन् । उक्त कारागारमा ठाउँ अभावका कारण पुरुषलाई मात्र राखिएको छ । त्यसमा पनि क्षमताभन्दा पाँच गुणा धेरै कैदीबन्दी बस्न बाध्य छन् । कारागारका […]